Sharciga iyo Nimcada, Kaniisada Dunida ee Switzerland (WKG)
Markii aan dhageysanayay heesta "State of Mind New York" ee Billy Joel dhowr toddobaad ka hor intii aan raadinayay wararkayga internetka, ayaa indhahaygu ku soo dhacayeen maqaallada soo socda. Waxay sharraxaysaa in gobolka New York uu dhowaan meel mariyay sharci mamnuucaya tattooing iyo duurjoogta. Waxay ii noqotay wax aan ku bartay inaan barto in sharci sidan oo kale ahi muhiim yahay. Sida muuqata, dhaqankan ayaa noqday mid isbeddelaya. Waxaan ka shaki qabaa in dad badan oo reer New York ah ay ogaadeen meel-marinta sharcigan maxaa yeelay waxay ahayd mid ka mid ah kuwa badan oo dhowaan laga dhaqan-galiyay gobolkaas. Dowladaha dabeecadda waxay leeyihiin fikir xagga sharciga ah heer kasta. Shaki kuma jiro inay qaadanayaan mamnuucyo iyo amarrado badan oo cusub. Inta badan, waxay isku dayayaan inay adduunka ka dhigaan meel wanaagsan. Xeerarka mararka qaar waa lagama maarmaan si fudud sababtoo ah dadku waxay la'yihiin caqli guud. Si kastaba ha noqotee, telefishanka wararka ee CNN ayaa soo sheegay in 201440.000 sharciyo cusub ay ka dhaqan galeen gudaha Mareykanka sanadkii.
Maxay sharciyo badani sidaas u leeyihiin?
Sababta ugu weyn sababtoo ah annaga oo ah bini'aadamka aan damac u leenahay dembi ayaa aan isku dayeynaa in aan raadinno meelaha bannaan ee xeerarka jira. Sidaas darteed, sharciyo badan iyo inbadan ayaa loo baahan yahay. In yar ayaa loo baahan doonaa haddii shuruucdu ay awoodaan inay dadku kaamil ka dhigaan. Laakiin tani maahan kiiska. Ujeedada sharciga ayaa ah in dadka aan xad dhaafka ah la joojiyo isla markaana la hormariyo kala dambeynta bulshada iyo wada noolaanshaha. Waraaq uu u diray kaniisadda ku taal Rome, Bawlos wuxuu ku qoray waxyaabaha soo socda ee Rooma 8,3 ku saabsan xadadka sharciga uu Ilaah u siiyey Israa'iil Muuse (Rooma 8,3 GN). «Sharcigu nolosha nooguma keenikaro aadanaha maxaa yeelay kama hor imaan karo dabeecadkeena. Sidaa darteed Ilaah wuxuu u soo diray Wiilkiisa qaab dabiici ah oo innaga mid ah oo isjecel, dad dembi leh, oo u daa inuu u dhinto dhibbane dembi. Sidaa darteed wuxuu sameeyay habka dembiga sida saxda ah meeshii ay ku kortay awooddeeda: dabeecadda aadanaha. »
Iyaga oo aan fahmin xadka sharciga, hogaamiyaasha diinta ee Israa’iil waxay ku darsadeen qodobo dheeri ah iyo wixii ku daro Sharciga Muuse. Waxay sidoo kale gaadhay heer ay adagtahay in la ilaaliyo sharciyadaan, iskaba daa in la raaco. Si kastaba ha noqotee inta sharci ee la meelmariyey, kaamilnimadu weligeed laguma gaadhin iyada oo la dhawrayo sharciga (weligiisna lama gaari doono). Taasina waxay ahayd sida saxda ah ee uu Bawlos u bartey Ilaah sharciga dadkiis si buuxda ugama siin (Xaq ah oo quduus ah). Kaliya Ilaah ayaa dadka ka dhiga kuwa kaamil ah, xaq ah, oo qoduus ah - nimco. Iyagoo isbarbar dhigaya sharciga iyo nimcada, dadka qaar waxay igu eedeeyaan inaan necbahay sharciga Ilaah iyo inaan hormariyo nacaybka. (Antinomism waa aaminaada ah in nimcada qofku laga soo daayay waajibaadka ah inay ilaaliso sharciga anshaxa). Laakiin waxba kama dheeraado runta. Sida dadka oo dhami, waxaan jeclaan lahaa in dadku ay sharciga ku sii fiicnaadaan. Kumaa doonaya inuu xumaado inuu jiro? Laakiin sida Bawlos xusuusiyey, waxaa muhiim ah in la fahmo waxa sharcigu sameyn karo iyo waxa uusan sameyn karin, oo naxariistiisa ayaa Ilaah siiyey reer binu Israa'iil sharciga, oo ay ku jiraan Tobanka Amar, si loogu hago jid wanaagsan. Taasi waa sababta uu Bawlos ku sheegay Rooma 7,12 (Tarjumida Nolosha Cusub): "Laakiin sharciga laftiisu waa qoduus, amarkuna waa quduus, waana xaq, wuuna wanaagsan yahay." Laakiin dabeecad ahaan, sharciga ayaa xaddidan. Ma badbaadin karto mana badbaadin karto qofna dambiile iyo xukun. Sharcigu xaq nooguma cadeyn karo ama dib u heshiisiin karo, iska daaya oo ha na ammaano.
Nimcada Ilaah oo keliya ayaa taas ku gaadhi karta shaqada dib u heshiisiinta ee Ciise iyo Ruuxa Quduuska ah oo inagu dhex jira. Siduu Bawlos ku qoray Galatiya 2,21, [GN]: «Diidi maayo nimcadda Eebbe. Haddaan Ilaah hortiisa istaagi karno oo sharciga dhammaystiray, markaas Masiix wuxuu u dhiman lahaa waxtarla'aan ".
Arrintan, Karl Barth wuxuu sidoo kale wacdiyey maxaabiista ku jirta xabsi Switzerland:
"Haddaba aan maqalno waxa Kitaabka Quduuska ahi leeyahay iyo waxa Masiixiyiinta ah loogu sheegay inaynu maqalno: Adigu hadiyad ahaan waad ku soo furtay! Qofna tan ma oran karo naftiisa. Mana u sheegi karo qof kale. Kaliya Ilaah ayaa noo sheegi kara midkeen kasta taas. Ciise Masiix waxaa loo baahan yahay inuu sameeyo bayaankan run. Waxay qaadataa rasuulka inuu la xiriiro. Oo waxay qaadataa kulankeena halkan sida Masiixiyiin ah inay ku faafiyaan dhexdeena. Sidaa darteed, waa war daacad ah iyo farriin gaar ah, waa wararka ugu xiisaha badan, sidoo kale waa kan ugu waxtarka badan - runtii waa midka kaliya ee waxtarka leh.
Markay maqlaan warka wanaagsan, injiilka, dadka qaar waxay ka baqaan in nimcada Eebbe aysan shaqeyn doonin. Sharci yaqaanada ayaa si gaar ah uga welwelsan in dadku ay nimcada u rogaan ruqsad. Ma fahmi kartid runta uu muujiyey Ciise in nolosheenu ay ka kooban tahay cilaaqaadka Eebbe. Markaad isaga lashaqeyso, booskiisa hal abuure iyo furayste gabi ahaanba su’aal kama taagna.
Doorkeenu waa inaan ku noolaano oo aan wadaagno warka wanaagsan, inaan ku dhawaaqno jacaylka Eebbe, oo aan tusaale u noqonno mahadnaqidda is-muujinta Ilaah iyo faragelinta nolosheena. Karl Barth wuxuu ku qoray "Kaniisadda Dogmatics" in adeeciddan Ilaah la siinayo ay ku bilaabmayso qaab mahadnaq ah: "Nimco waxay abuurtaa mahadnaq, sida dhawaaq dhawaaqa dhawaaqa". Mahadcelintu waxay raacdaa nimco sida onkod iyo hillaac.
Barth ayaa sii faallo ka bixisay:
«Markuu Eebbe jeclaado, wuxuu muujiyaa inuu ku jiro jaceylkiisa dhabta ah ee ah inuu isagu jecel yahay sidaas darteedna uu raadinayo oo abuuro is wehesho. Jiritaanka iyo wax qabadku waa rabbaani waana ka duwan yahay dhammaan noocyada kale ee jacaylka ilaa inta jacaylku yahay nimcada Ilaah. Nimcadu waa dabeecadda aan la dafiri karin ee Eebbe sida ay doonayso oo ay bulshada ugu abuurto jacaylkiisa iyo jacaylkiisa xorta ah, iyada oo aan shardi laga gelin wax u qalmo ama sheegasho gacaliye, kama horjoogsanayso wax-ka-dhigid la'aan ama mucaaradnimo, laakiin taa liddi ku ah, dhammaan u-qalmitaanka iyo in laga gudbo caabiga oo dhan. Muuqaalkan lagu kala soocayo wuxuu awood inoo siinayaa inaan garto Ilaahnimada jacaylka Eebbe. »
Waxaan qiyaasi karaa in qibradaada aysan ka duwanaan laheyn tan xagga sharciga iyo nimcada. Sidaada oo kale, waxaan aad uga jeclaan lahaa in xiriir ka dhalato jacayl qof ka go'an sharciga. Ilaah jacaylkiisa iyo nimcadiisa darteed, anaguna waxaan jecel nahay inaan jeclaanno oo isaga ku farxin. Dabcan waxaan isku dayi karaa inaan adeeco isaga oo ka duulaya dareen waajib ah, laakiin waxaan jeclaan lahaa inaan isaga ugu adeego sidii muujinta jaceylka dhabta ah ee jacaylka.
Markaan ka fekero nolosha nimcada, waxay i xasuusineysaa hees kale oo uu qaaday Billy Joel: "Ilaalinta iimaanka" (dt: «iimaanka ilaali»). Hadeysan ahayn fiqi ahaan sax ahaaneed, heesta waxay keenaysaa farriin muhiim ah: «Hadday xusuustu kusii jirto, markaa iimaanka ayaan hayn doonaa. Haa, haa, haa, haa. Iimaanka ilaali. Haa, waan dhawraa iimaanka. Haa, waan sameeyaa.